Ukungeniswa kwedlozi – iAfrika
Ukungeniswa kwedlozi ekhaya kungenye yemicimbi evamile ukwenziwa kwelakwaZulu. Kuye kuhluke ngezigodi ukuthi bawubiza kanjani lomcimbi, uvamisile futhi nokubizwa nge “ladi”. Abantu abangasekho bayahlonishwa kakhulu ngoba kukholelwa ukuthi yibona abasixhumanisa noNkulunkulu uMdali. Kukholelwa kakhulu ekutheni ukuze izinto zihambe kahle emndenini kudingeka kulungiswe izinto nabangasekho. Amaphupho ngenye indlela okuxhunyanwa ngayo nabangasekho.
Izizathu zokwenza umcimbi wokungeniswa kwedlozi
Umcimbi wokungeniswa kwedlozi uyaye wenziwe uma omunye womndeni ebe nephupho ngongasekho wasemndenini. Uma lowo osewadlula emhlabeni ovele ephusheni egcine ngokungangeni ekhaya, kwesinye isikhathi uyaye acacise ngezizathu zokungangeni kwakhe ekhaya. Uma engacacisanga futhi engavezanga ukuthi kungani angangeni ekhaya kuyaye kudingeke ukuthi umndeni uye kumuntu obonayo okungaba isangoma noma umthandazi okube sekuba wuyena obatshelayo ukuthi kungani lo osedlule emhlabeni evele ephusheni kodwa akangangena ekhaya.
Indlela umcimbi wokungeniswa kwedlozi owenziwa ngayo
Lapho kwenziwa umcimbi wokungeniswa kwedlozi kuyaye kuvukwe ekuseni kuyiwe emathuneni.
Emathuneni kufikwa kushiswe impepho okuyiyona phela esetshenziselwa ukuxhumanisa abantu abangasekho emhlabeni nalabo abasaphila.
Ngesikhathi impepho ishiswa kube kukhulunywa nalomuntu okumelwe angeniswe ekhaya, nabanye-ke nje nabo asebadlula emhlabeni kungakhulunywa nabo uma kunemilayezo.
Inqobo yenkulumo nabangasekho kusuke kuwukucela uxolo bese beyaziswa ukuthi bazongeniswa-ke ekhaya.
Uma sekubuyiwe emathuneni sekufikwe ekhaya kuyaywe kuhlatshwe izinkukhu noma izimbuzi bese kulungiswa ukudla lokho abangasekho emhlabeni ababekuthanda. Ngokuvamile kuba ngukudla kwesintu njengobhatata, amadumbe kanye nojeqe. Umcimbi usuke ungaphelele ngaphandle kotshwala besiZulu obubizwa ngokuthi “umqombothi”.
Ukudla okulungisiwe kuyaye kube sekubekwa emusamu, akuvumelekile ukuthi kudliwe abantu bangaphandle, amalunga omndeni kuphela angakudla.
Nokho-ke akungaso sonke isikhathi lapho umcimbi wokungenisa idlozi wenziwa khona ngoba kusukela ekuphupheni lowo osewadlula emhlabeni. Empeleni ngokuvamile umcimbi wokungeniswa kwedlozi wenziwa lapho umndeni washintsha khona umuzi noma indawo yokuhlala futhi ngalesosikhathi kwangwabikwa edlozini ukuthi umuzi usuthuthile sekuyohlalwa kwenye indawo. Esimweni esinjalo-ke kuyaye kwenziwe umcimbi wokungeniswa kwedlozi.
Umcimbi wokungeniswa kwedlozi wehlukile emcimbini owenziwa lapho khona kulandwa ongasekho.
Tags Ukungeniswa kwedlozi Post navigation